यो देशमा बाबुरामलाई बाँच्ने अधिकार छैन !
जब आफ्नै दराजमा राखेको पैसा हराएको कुरा बिभिन्न संचारमाध्यमबाट थाहा पाउनुपर्ने अबस्थाका प्रधामन्त्री बेदको लौरी टेकेर सिंहदरबारमा देश चलाउने कुर्सिमा बसेर निदाएको हुन्छन्, त्यो बेला युवाहरु ताम्लाकुम्ला कसेर विदेश पलायन भए भनेर रुवाबासी गर्नुको खासै अर्थ भेटिँदैन । जीवनको सबैभन्दा कम उर्जाशील उमेरमा देश निर्माणको जिम्मा पाएका कोईराला जवान हुँदा नायक बन्ने सपनामा तुषारापात भएपछि खान्दानी काँग्रेसमा बंशको बिँडो धान्दै बालुवाटारमा दैनिक १८ घण्टा आराम गरेर साउथ ईन्डीयन मुभी हेर्दै ताली बजाईरहेका होलान् । नागरिकबाट लात खाएर बालुवाटार पुगेका प्रतिक प्रधानले चलाएको उनको अफिसियल टि्टर एकाउण्ड ह्याक भएको पनि थाहा पाए कि नाई ?
मैले सुनेको थिए बुढेसकालमा मान्छेहरुको पाचन प्राणाली कमजोर हुन्छ । धेरै खान सक्दैनन् । तर उनले त प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न ५५ पद पचाएका छन् । अब हुँदाहुँदा प्राधिकरणको प्रमुखसम्म पचाउने भएका छन् । असी कटेका हजुरबाहरुले चलाएको देशमा युवाहरु उनीहरुको भक्तिगान गाउँदैछन् । बरा ! सधैँ युवाहरुले पहल गर्नुपर्छ भन्ने गगनहरु पनि बुढा प्रधानमन्त्रीलाई बैशाखी टेकाएरै भएपनि उभ्याउनु पर्छ भनेर संचार माध्यमहरुमा गनगन गर्दै आएका छन् । यो भन्दा ठूलो लाजको बिषय अरु के हुन सक्छ ?
नेपालको नेताहरुले कहिल्यै पनि नेपाली जनताको मनोभावनाअनुसार काम गर्न सकेनन् । त्यहिकारण तत्कालीन व्यवस्थामाथी वितृष्णा पैदा हुन थाल्यो । स्थायी प्रकारको सरकार बन्न सकेन । मौसम अनुसार बदलिरहने सरकारको कारण नेपाली जनताहरुको सरकार र नेताप्रति विश्वास घट्दै गएको हो । उनीहरुले देशमा बसेर केही नहुने संभावनासहित विदेश पलायनको योजना बनाए ।
जब देशमा राम्रा मान्छेहरुले कहिल्यै शासन गर्न पाउदैनन् । जब योजनासहित मान्छेहरु देश निर्माणको मूल भागमा पुगेको हुन्छ, त्यो बेला उसलाई बदनाम गराउनका लागि सबै कम्मर कसेर लागेका हुन्छन् । भूकम्पको १५ दिनसम्म मर्ने डरले बिरामी भएर जनतालाई पालमा सुत्न हुँदैन भन्दै पालमा सुत्ने प्रधानमन्त्री पुन:निर्माणको अध्यक्ष बन्ने प्रस्ताव लिएर संसदको ढोका हुँदाहुँदै शितलनिवासको झ्याल खोलेर राष्ट्रपति निवासमा पुगेछन् । बुढा भएपछि दिमागले त्यति साह्रो काम गर्दैन भन्थे केहि दिनमा बस्ने संसदको बैठकमा प्रस्ताव लिएर जानुको सट्टा चोर बाटोबाट शीतल निवास पुग्न हतारिनुको पछाडीको कारण खोज्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
बरा ! सधै युवाहरुले पहल गर्नुपर्छ भन्ने गगनहरु पनि बुढा प्रधानमन्त्रीलाई वैशाखी टेकाएरै भएपनि उभ्याउनुपर्छ भनेर संचार माध्यमहरुमा गनगन गर्दै आएका छन् । यो भन्दा ठूलो लाजको बिषय अरु के हुन सक्छ ?
भूकम्प गएको दिनदेखि भूकम्प पीडितको घरदैलोमा पुगी डा. बाबुराम भट्टराईले देखाएको सक्रियताको कारण अन्य नेताहरुको निद् हराम भएको थियो । भूकम्पमा परी मरिने डरले चौरबाट बाहिर उम्कन नसकेका नेताहरु बाबुरामको सक्रियतापछि मात्र लाजकाजले बाहिर निस्किएका थिए । तर पनि बाबुरामले काम गरेका तस्वीरहरुले सामाजिक संजालमा छ्यापछ्याप भएपछि अन्य नेताहरुको ध्यान उनलाई प्राधिकरण प्रमुख बनाएर नेपाललाई विकासको बाटोमा अगाडी बढाउनुको साट्टो बाबुरामरुपी बृक्ष काट्न हतियार लिएर नेताहरु लागेका थिए ।
अन्य पार्टीका नेताहरु उनको विपक्षमा लाग्नुलाई नेपाली राजनीतिमा खासै नौलो मानिँदैन । तर, उनकै पार्टी अध्यक्ष पनि बाबुरामको सक्रियताबाट अत्तालिएर बाबुरामलाई पुन:निर्माण प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न नदिनको लागि छिर्के हान्न पुगेको कुराले आम नेपाली जनतालाई दुःख लागेको छ ।
बाबुरामलाई प्राधिकरण प्रमुख नबनाउनुको कारण खोतल्दा उनले केही अपराध गरेका छन् । जसलाई बुँदागत ढङ्गबाट प्रस्तुत गरिएको छ ।
बाबुरामले पार्टीभन्दा माथी उठेर देश विकासको योजना बनाउनु उनको ठूलो अपराध हो ।
साम्यवादी सिद्धान्तमा आस्था राख्ने पार्टीमा आस्था राख्ने उनले एकीकृत विकासको योजना बनाउनु उनको अर्को अपराध हो ।
भूकम्प आएको दिनदेखि नै भूकम्पपीडितको घरमा पुगी दुःख, सुख साट्नु अर्को अपराध हो ।
उनले पढेको बिषय आर्किटेक हुनु उनको अर्को अपराध हो ।
पिएचडी नेपाल अविकसित हुनुका कारण र क्षेत्रीय अवस्थामा गर्नु उनको अर्को अपराध हो ।
त्यत्तिका पढेका मान्छे भएर पनि अन्य पेशा व्यवसाय नगरेर राजनीति गर्नु उनको अर्को अपराध हो ।
प्रधानमन्त्री हुँदा काठमाडौंको बाटो फराकिलो बनाउने लगायतको काम उनको अपराध हो ।
अर्थमन्त्री हुँदा ऐतिहासिक कर संकलन गरेर राष्ट्रिय पूँजी बढाउनु उनको अपराध हो ।
एमाओवादी भित्र प्रचण्डको तमशरणम नगरी आफ्नै योजना निर्माण गर्नु उनको अर्को अपराध हो ।
उनले गरेका ति अपराधका कारण बाबुरामलाई यो देशमा बाँच्ने अधिकार छैन । त्यसैले उनलाई यो देशबाट निकाला गरियोस् या फाँसीको सजाय दिईयोस् । यो देशमा देश बनाउँछु भन्नेहरुलाई बाँच्ने अधिकार छैन । यो देशमा भिजन भएका नेताहरुको कुनै काम छैन । त्यसैले आउनुहोस् बाबुरामलाई देश निकाला गर्ने अभियानमा हातेमालो गरौँ ।
एसएलसी फेल भएका ८० वर्षे हजुरबाहरुले चलाएको देशमा उनलाई बाँच्ने कुनै अधिकार छैन । यो देश चलाउनका लागि योजनाको हैन बरु ८० कट्नुपर्ने नियम छ ।
हामी निरन्तर माग्ने संस्कृतीबाट अभ्यस्त छौँ । हामीलाई आँफै केही गर्ने खालको योजना बनाउने मान्छेको खाँचो नै छैन । हामी बरु विदेशमा गएर गुलामी गरौँला, देशमा नै हामीलाई पनि केही गर्नु नै छैन । एसएलसी फेल भएका ८० वर्षे हजुरबाहरुले चलाएको देशमा उनलाई बाँच्ने कुनै अधिकार छैन । यो देश चलाउनका लागि योजनाको हैन बरु ८० कट्नुपर्ने नियम छ ।
त्यसैले तपाईं हामीजस्ता युवाहरुले पनि अब राष्ट्रनिर्माणका कुरा गरेर जीवनको उर्जाशील उमेर खेरा नफालौँ । कारण, यो राष्ट्रनिर्माणको जिम्मा तपाईं हाम्रो काँधमा कहिल्यै आउनेवाला छैन । यो देशका नेताहरु फोहोर सोहोर्नमा भन्दा फोहोर गर्नमा माहिर छन् । त्यसैले देश बन्नेवाला छैन । आउनुहोस् एकपटक फेरी सुशिल हजुरबालाई काँधमा बोकेर देश निर्माणका लागि एकहुल हजुरबाहरुलाई पठाऔँ । र, योजना भएका मान्छेहरुलाई यो देशबाट लखेटौँ ।
त्यो राजनीति, यो राजनीति, भुइँचालो र मेरो विद्यालय